Waxgaradka Caluula oo codsaday in loo sameeyo maamul Degmo. – Radio Daljir
Nofeembar 22, 2012 9:11 g 0
Caluula Nov 22, Odayaasha iyo Waxgaradka degmadda Caluula ee gobolka Bari ayaa Maamulka Puntland ka codsaday in loo sameeyo maamul degmo oo loo dhanyahay kaasoo wax ka qabta adeegyada bulshadda ee ay u baahan yihiin dadka deegaanku.
Cali Muuse Maxamed oo kamid ah waxgaradka degmada Caluula oo Waraysi gaar ah siiyey Radio Daljir ayaa sheegay inuusan degmada ka jirin wax maamul ah iyadoo aysan sidoo kale jirin Cashuur la qaado & Ciidan Bilays midna.
Wuxuu sheegay in arimaha bulshada sida Waxbarashadda iyo Caafimaadka ay aad u hooseeyaan isagoo dawlada ugu baaqay inay arimahaasi wax ka qabato.
Sidoo kale Cali Muuse Maxamed, Wuxuu sheegay in qaar kamid ah Maraakiibta ilaaladda xeebaha ee dunida ka socdaa ay adeegyo caafimaad ka fuliyeen deegaano ka tirsan degmada Caluula, hase ahaatee wuxuu sheegay in adeegyadaasi ay dadka qaar u turjumeen si khaldan oo dadka shaki ku abuureen.
Degmadda Caluula ee gobolka Bari ahna degmadda keliya ee kulmisa Baddaha Soomaaliya sida Badweynta India & Badda Cas, ayaa kamid ah deegaanadda fog ee gobolka Bari taasoo inta badan aysan gaarin maamulka Dawladu, sanadkii hore waxaa looga dhawaaqay maamul lagu magacaaabay Raascasayr hase ahaaatee maamulkaasi ayaan hirgelin kadib markii dadka deegaanku ku kala qaybsameen arinkaaasi.